Art is My Life: February 2007
ကျွန်တော်တို့ လုပ်မဲ့မြန်မာ ဘလော်ကာစာအုပ်ကတော့ ၀ိုင်းဝန်းပါဝင်လာကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများရဲ့ အင်အားတွေကြောင့် သေချာပေါက် ထုတ်ဖြစ်ပါတော့မယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလဲ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းတိုင်ပင်နေကြပါပြီ။
ကိုညီလင်းဆက်ကတော့ seminar တစ်ခုလုပ်ရင် အဆင်ပြေမယ်လို့ ကြံပြုပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင်တန်းစင်တာ တစ်ခုနဲ့ညှိနိုင်းပြီး seminar တစ်ခုအဖြစ် အရင် ကြိုးစား ကြည့်ပါမယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အင်တာနက်ကို သုံဖြစ်သော်လည်း ဘလော့မရေး ဖြစ်သေးတဲ့လူတွေကို ဘလော့ရေးဖို့ရာအတွက် စည်းရုံးသွားမဲ့သဘောပါ။ ဒါကြောင့် မြန်မာဘလော်ကာတွေ ထပ်တိုးလာပြီး စာအုပ်ထုတ်မဲ့ အချိန်မှာ ပိုပြီးသိုက်သိုက် ၀န်းဝန်း ဖြစ်သွားပါမယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင် ကြမဲ့သူငယ်ချင်းရဲ့ အကြံဥာဏ်နဲ့ လမ်းညွှန်ချက်များကို လည်းကြားချင်ပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင် ခြင်းမရှိသူများလည်း ပါဝင်ဆွေးနွေး အကြံပြုပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
စာအုပ်ထုတ်လုပ်မဲ့ စရိတ်ကို တစ်ဦးချင်းထည့်ဝင်ရမဲ့ ပမာဏ စာအုပ်ကို ဘယ်လောက်နဲ့ ရောင်းမယ်ဆိုတာ မသတ်မှတ်ရသေးပါဘူး။ အဝေးရောက်သူ ငယ်ချင်းများအနေနဲ့ ငွေကြေးပါဝင်ဖို့ အဆင်မပြေရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး။ စာမူပဲ ပေးကြပါ ကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ စုလို့ရသလောက် ငွေပမာဏနဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖြစ်အောင်လုပ်သွားမှာပါ။
လက်လှမ်းမှီရာ သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ ဒီမှာလာပြီး ပူးပေါင်းကြဖို့ ပြောပေးကြပါဦး
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 11:21 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 1:31 AM3ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 9:56 AM5ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
နောက် 007 ဇတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်မဲ့ ဘုသ်နှင့် ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်
ကာယဘလမောင် ဖြစ်သွားတဲ့ ဘီလ်ဂိတ်
ကလင်တန်ကို ကြိုးဝိုင်းပေါ်မှာ အနိုင်ယူမဲ့ ဘုဘ်
Rapper ဖြစ်သွားတဲ့ ကိုဖီအာနံ
တကယ်ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကို ဒီလိုလုပ်တာတော့ မသင့်တော်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီဇိုင်နာများရဲ့ ကြံဖန်ဖန် ဟာဥာဏ်ဖန်တီမှုကတော့ ပေါ်လွင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် အများကြီးကြည့်ချင်သေးရင် ဒီနေရာကို သွားပါ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 8:31 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
မင်းဆီကို ဖုန်းဆက်ဖို့ တောင်းဆိုနေတယ်
ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ကွာ အမှတ် မရှိတဲ့ ဦးနှေက်က လက်ခံပြီး
ခပ်ချာချာ ပါးစပ်က အစီအစဉ်မကျတဲ့ စကားတွေ ပြောဖို့
အသုံးမကျတဲ့ လက်တွေနဲ့ နင့်ဆီကို ထုံးစံအတိုင်းပဲ ဖုန်းဆက်ခဲ့တယ်။
ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ နင်မောသွားတော့ ဖုန်းကအားသွားတယ်
ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ တယ်လီဖုန်းဘေးမှာ နှလုံသားတစ်ခုဟာ ကြေကွဲလို့
အဲဒီညက ဖေဖာဝါရီလ ၂၅ ရက်
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 2:39 AM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 4:53 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
လုပ်ချင်စိတ်တွေ ပျင်းပြနေချိန်မှာ လုပ်မိတဲ့ အလုပ်တွေဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ တူမတူအောင် ပြောင်မြောက်သလို တစ်ခါတစ်ရံမှာ တစ်သက်စာ ရှင်းမရတဲ့ အမှားတွေလည်း ဖြစ်သွားတတ်ကြသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်တစ်ခု လုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာမည့် ဆိုးကြိုးများကို အဆုံးထိသာ တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒီလောက် ငါ့ကံကြမ္မာက ဆိုးရွားခဲ့ရင် ငါဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲ။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 3:35 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ဒီလို ရယ်စရာကောင်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် တော့ ဒီနေရာမှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ် ပုံပေါင်းရှစ်ရာကျော်ရှိပြီး ဓာတ်ပုံများကို ဟာသမြောက်အောင် ဖန်တီးထားသည်
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 1:30 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 12:16 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 12:37 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ဘာလိုလိုနဲ့ ဒီနှစ်သင်္ကြန်ကို ရုံးပိတ်ရက် ၁၀ ရက် သတ်မှတ်လိုက်တယ်တဲ့။ ကောင်းသလား မကောင်းသလားတော့ မသိဘူး။ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေကတော့ ကြိုဆိုကြတယ်။ ကုပ္ပဏီ လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ ညဉ်းနေကြတယ်။ အစိုးရက အများပြည်သူများ ရုံးပိတ်ရက် အနေနဲ့ တရားဝင် ကြေငြာ လိုက်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကုမ္ပဏီတွေလဲ ၁၀ ရက်ပိတ်ရမဲ့ သဘောမှာရှိနေတယ်။
၁၀ ရက်ဆိုတာကတော့ မြန်မာရုံးပိတ်ရက် သမိုင်းမှာ အရှည်လျှားဆုံး ရုံးပိတ်ရက် အဖြစ်မှတ်တမ်း တင်သွားပါပြီ။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကတော့ ရေရေလည်လည် ပျော်တာပဲ။ ရုံးပိတ်ရက် ရှည်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ဖျားကနေ တောင်ဖျားရောက်အောင် ခရီးစဉ်ရှည် ကြီးတွေဆွဲပြီး ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။ ကုပ္ပဏီ ၀န်ထမ်းတွေကတော့ သိပ်မပျာ်ကြသေးဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့ကို ရုံးပိတ်ပေး မလားမပေးဘူး လားဆိုတာ မသေချာဘူးလေ။ ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင်က ညစ်ပတ်ပြီး မပိတ်ရင်လည်း မြန်မာက လူတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ပါးစပ်လေးပိတ်ပြီး ခေါင်းငုံ့ ခံနေရုံပဲရှိတာပေါ့။
ဒီရုံးပိတ်ရက်ရှည်ကြောင့် တစ်ချို့နေရာတွေမှာ တော့အခက်အခဲ ရှိသွားမှာ သေချာပါတယ်။ ပတ်စပို့ ရုံးတွေပိတ်မယ်။ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်တာတွေ အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆေးရုံတွေ မှာတော့ အနည်းနဲ့ အများဆိုသလို အခက်အခဲဖြစ်သွားမှာပဲ။
တစ်ဘက်ကကြည့်ရင် နိုင်ငံတော်ရဲ့ လုပ်အားတွေ ၅ ရက်စာလောက် ဆုံးရုံးသွားတဲ့ အတွက် GDP မှာလည်း ၅ ရက်စာ လျှော့သွားနိုင်ပါတယ်။ အရှုံးခံပြီး လုပ်နေရတဲ့ အစိုးရ လုပ်ငန်း အချို့ ကတော့ ၅ ရက်စာ နိုင်ငံတော် ဘားဂျက်သက်သွား တာပေါ့။ ဘာဘဲဖြစ် ဖြစ် ကျွန်တော်ကတော့ ၁၀ ရက် အတွင်းမှာ ကောာင်းကောာင်း အိပ်လို့ရတာပေါ့
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 10:37 PM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 8:55 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ကဲအပ်စိုက်ကု ပညာအကြောင်း ပြောကြည့်ရအောင်။ အပ်စိုက်ကု ပညာ acupuncture ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းလေးထောင်ကျော် လောက်က တရုတ်ပြည်မှ စတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ပညာရပ်ဖြစ်တယ်။ လူ့ခန္ဒာကိုယ်ပေါ်မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချက်အချာနေရာ များကို အပ်ငယ်များဖြင့် ထိုးစိုက်လုံ့ဆော်ပေးခြင်း ဖိနှိပ်ခြင်း လျှပ်စီးစေခြင်းအားဖြင့် နာကျဉ်မူကို သက်သာစေခြင်း ရောဂါပျောက်ကင်းစေခြင်း တို့ကိုဖြစ်စေတယ်။
ခောတ်ဦးကာလက ၀ါး ငါးရိုး ဖြူဆူးများကို အသုံးပြုခဲ့ကြပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ကြေးဝါအပ်ငယ်များ ငွေအပ်ငယ်များ သုံးလာရာက အခုဆိုရင် စတီးအပ် တစ်ခါသုံးအပ် (DISPO-SIBLENEEDLE) များကို အသုံးပြုနေကြပါပြီ။
အပ်စိုက်ကု ပညာသည် ခြောက်ရာစုခန့်တွင် ဂျပန် ကိုးရီးယား ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများသို့ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး၊ ၁၉၂၈ တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ၁၉၇၁ တွင်အမေရိကန် နိုင်ငံတို့ကို ရောက်ရှိသွားပါတယ်။
၁၉ ရာစု အရောက်မှာတော့ ဆရာဝန်အပ်စိုက် ကုပညာနဲ့ တရုပ်တိုင်းရင်း အပ်စိုက်ကု ပညာဆိုပြီး နှစ်မျိုးကွဲသွားခဲ့တယ်။
တရုပ်တိုင်းရင်း အပ်စိုက်ကုပညာက ရောဂါရှာဖွေရာမှာ သူတို့ရိုးရာနည်းဖြစ်တဲ့ ယင်နဲ့ယန်နဲ့ ရှာဖွေတယ်။ ပျောက်ကင်းခြင်း ရှိမရှိဆိုတာကို လည်းတရုပ်တိုင်းရင်းနည်းနဲ့ စမ်းသပ်ပြီးပြောတယ်။
ဆရာဝန် အပ်စိုက်ကု ပညာက ရောဂါရှာဖွေတာကို သိပ္ပံနည်းကျ ဆရာဝန်ပညာနဲ့ ရှာတယ်။ ပျေက်ကင်းခြင်းရှိမရှိ ဆိုတာကိုလည်း ဆရာဝန်နည်းနဲ့ စမ်းသပ်ပြီး ပြောတယ်။ အပ်စိုက်ကု သတဲ့ အပိုင်းမှာ ဘယ်ရောဂါ ဖြစ်ရင် ဘယ်နားကိုအပ်စိုက်ရ မယ်ဆိုတာ ကတော့ အတူတူပါပဲ။
ကမ္ဘာ့ကျမ္မာရေးအဖွဲ့ WHO က သုသေသနပြုချက်အရ အပ်စိုက်ကု ပညာနဲ့ ရောဂါအမျိုးပေါင်း ၁၀၇ မျိုးကိုပျောက်ကင်းအောင် ကိုသနိုင်တယ် ဆိုတာကိုလည်း တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာ ထားပြီးတာဖြစ်တယ်။
ဆရာဝန်ပညာနဲ့ ကုလို့မပျောက် နိုင်တဲ့ ဒူးနာတာ လေဖြတ်တာ မျက်စိအရောင်ကြောင် ( Color Blind ) ဖြစ်တာ တို့ကို အပ်စိုက်ကု ပညာနဲ့ ကုသရင် လူ၁၀၀ မှာ ၉၉ ယောက် သက်သာပျောက်ကင်းတာကို တွေ့ရတယ်။
ဒါကြောင့် ဆရာဝန် အပ်စိုက်ကုထုံးကို နိုင်ငံတကာက ဆေးရုံးကြီးတွေမှာ လက်ခံကျင့်သုံးနေကြပြီ ဖြစ်သလို အချို့သော ဆေးတက္ကသိုလ်တွေမှာ ဘာသာရပ် တစ်ခုအနေနဲ့ ထည့်သွင်းသင်ကြားနေကြပါပြီ။
အပ်စိုက်ကု ပညာရဲ့ နောက်ထပ် စွမ်းဆောင်ချက်တစ်ခုက ထုံးဆေးလိုလဲ သုံးလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ ဦးခေါင်းခွဲစိတ်တဲ့ လူနာကို ခေါင်းရဲ့ တစ်နေရာမှာ အပ်လေးတစ်ချောင်း စိုက်ထားလိုက်ရုံနဲ့ လူနာဟာ ပန်းသီးစား မပျက်ပဲ ခေါင်းခွဲစိတ်ကုသ မှုကိုခံနိုင်ပါတယ်။
WHO ရဲ့သုတေသနပြုချက်အရ အချက်အချာကျတဲ့နေရာ ACU-POINTS တွေကို ဖိနှိပ်ခြင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် လှုံ့ဆော်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ခန္ဒာရှိ အာရုံကြောများမှ လှုံ့ဆော်မူပစ္စည်း NEURO-TRANSMITTOR များ ထွက်လာစေပြီး ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အပ်စိုက်ကု ပညာအကြောင်း ပြောပြပေးတဲ့ ပါမောက္ခဒေါက်တာ အောာင်မြတ်သွင် မေ့ဆေးဆရာဝန်ကြီး ဆေး ၂ ကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 3:24 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
နီးလျှက်နဲ့ ဝေးနေတာထက်စာရင် အဝေကြီးမှာနေပြီး ဝေးနေရတာ ပိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိမယ် ထင်လို့ပါ
မင်းနဲ့ဒို့ကြားမှာ တစ်ခုခုခြားနေလို့ ဖြစ်မှာပါ
ခြားနေတဲ့ အရာကိုတွေ့ရင် မော့မကြည့်လိုက်နဲ့ နော်
မြင့်လွန်းတဲ့အတွက် မင်းစိတ်ပျက်သွားမှာ စိုးလို့ပါ
ဒါပေမယ့် ဒီလောက် အမြင့်ကိုတော့ ဒို့ကျော်မယ်ဆိုရင်ရပါတယ်
ဒါပေမယ့် မကျော်ဘာနဲ့ ဦးလားကွာ
မတွေ့ရရင်လည်းခဏပေါ့ ဒီတံတိုင်းကြီးကို ကျော်ဖြစ်ဖို့ရာ အချိန်က စောလွန်းနေပါသေးတယ်
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 2:44 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ကျွန်တော် ၁၇ နှစ်သား ဆယ်တန်းအောင်တဲ့ နှစ်က ရေးထားတဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးပါ။ ကျွန်တော့ ဘ၀မှာ ပထမဆုံး ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဇတ်လမ်းလေးဆိုရင် လည်းမမှားပါဘူး။ အဲဒီတုန်းက ခံစားချက်တွေကြောင့် ရေးမဲ့တာရေးလိုက်တာ အချစ်ဝတ္ထုဆိုရင် တစ်အုပ်မှကို မဖတ်ဘူးသေးဘူး။ ဒါကြောင့် နည်းနည်းတော့ သီးခံဖတ်ပေါ့
ပျောက်သောသူရှာရင်တွေ့ သေသောသူ ကြာရင်မေ့ တဲ့။ ဒါပေမယ့် ထား ကိုဒို့ရင်ထဲက တစ်သက်လုံးမေ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နှလုံးသားက အချစ်တွေဟာ မဖယ်ခွာနိုင်လို့ပါ။ တစ်ဦး တစ်ယောက် တည်းကိုသာ ရှုးမလောက် စွဲအောင်ချစ်တတ်တဲ့ ဒို့နှလုံးသာမှာ ထား ကလွဲပြီး ဘယ်သူကိုမှ အစားထိုးလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်တွေကို ဒို့နှစ်ယောက်ကလွဲပြီး ဘယ်သူမှလဲ မသိနိုင်ပါဘူး။
ဟိုတစ်ချိန်က မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ ထင်းရူးပင်လေးတွေ စီတန်းပေါက်နေတဲ့လမ်းလေးမှာ ထားနဲ့အတူတူ လျှောက်သွားခဲ့ကြတာတွေ၊ အနီရောင်ခြယ်တဲ့ စိန်ပန်းပင်လေးရဲ့ ထိုင်ခုံမှာ နှစ်ယောက်သား စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့ပြောခဲ့ကြတာတွေ၊ ယနေ့တိုင် မမေ့နိုင်အောင်ပဲ။ တစ်နေ့ ထင်းရူးပင်လေးတွေ စီတန်းပေါက်နေတဲ့ လမ်းလေးမှာလျှောက်ရင်း
ထားရယ် နေ့တိုင်းလျှောက်နေရတာ မညှောင်းဘူးလားလို့ မေးတော့
ကိုနဲ့ဆိုရင် ကမ္ဘာဆုံးအောင်လျှောက်နိုင်ပါတယ် လို့ပြောပြီး ရယ်ခဲ့တဲ့ ထားရဲ့ ရယ်သံလေးတွေ ဒို့နားထဲမှာ အခုထိပျံ့လွင့်ဆဲပါ။
ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ ပြီးခါစက မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေဆီကို အလည်သွားခဲ့တယ်လေ။ နှစ်ပတ်လောက်နေပြီး ကျွန်တော်တို့ မြို့လေးဆီကို ပြန်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ ထားနဲ့တွေ့တော့တာပါပဲ။
၅၆ အစုန် အထူးအမြန်ရထားရဲ့ ပထမတန်းတွဲမှာပါ။ ကျွန်တော်က ရထားမထွက်ခင်နာရီ ၀က်လောက်စောပြီး ကျွန်တော့ခုံမှာ ထိုင်နေတယ်။ ရထားပေါ်မှာ ခရီးသည်တွေ လိုက်ပို့သူတွေရဲ့ စကားသံတွေ နုတ်ဆက်သံတွေ ကလည်းညံနေတာပဲ။
ရထားထွက်တော့မယ်။ တွဲပေါ်မှာရှိတဲ့ ခုံတွေကတော့ လူပြည့်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့ ဘေးနားက ခုံကလေးကတော့ လွတ်နေဆဲပါ။ ရထားကလည်း ဥသြဆွဲပြီ။ ကျွန်တော် ဘူတာဘက်ဆီကို ငေးနေမိတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ထားမှန်းမသိတဲ့ ထားတစ်ယောက် ရထားဆီကို အပြေးလေးလာနေတယ်။ ကျွန်တော့စိတ်ထဲမှာ မှီပမှိပမလားလို့ စိုးရိမ်နေပေမယ့် ရထား မထွက်ခင်လေးမှာ ထား တွဲပေါ်ကိုရောက်လာတယ်။ ထား ရထားပေါ် ရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ ရထားလဲ ထွက်တော့တာပဲ။ ထားက သူ့လက်မှတ်လေးကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ ခုံဆီကိုလျှောက်လာတယ်။ ပြီးတော့ ထားနေရာ ဖယ်ပေးပါလို့ ကျွန်တော့ကို လာပြောတယ်။ သူ့နာမည်က ထားတဲ့လား ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ ရေရွတ်လိုက်မိတယ်။ ကျွန်တော့ ခုံလည်းဒါပဲ ဆိုပြီး ကျွန်တော့ လက်မှတ်ကို ထုတ်ပြလိုက်တယ်။ လက်မှတ် နှစ်စောင်လုံးက C,4 ။ လက်စပ်တပ်တော့ ထားနဲ့ကျွန်တော် ခုံနံပါတ်ခြင်းလာတူနေတာလေ။ ကျွန်တော်ကလည်း ပြူတင်းပါက်နားလိုချင်လို့ ၀ယ်ထားတာ မဖယ်နိုင်ဘူးပေါ့။ အဲဒီမှာ နုတ်ခမ်းလေးစူပြီး ကျွန်တော့ကိုရန်တွေ့တော့တာပဲ။
ထားစိတ်ညိုလာရင် အရုံးပေးတတ်တဲ့ကျွန်တော်ဟာ ထားကို စတွေ့ကတည်းက အရုံးပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေကို ထားသိမှာပါ။
ဒီလိုနဲ့ ရထားဟာ ခုတ်မောင်းလာခဲ့တယ်။ ထားကတော့ ထိုင်ခုံကိုမှီပြီး ပြူတင်းပေါက်ကနေ တဆင့် တောတောင်ရှုခင်းတွေရဲ့ အလှကို ကြည့်နေတယ်။ လေတိုက်လိုက်တိုင်း ရိမ်းနွဲ့နေတဲ့ ဆံနွယ်လေးတွေရဲ့ ကြားက ထားရဲ့ မျက်နှာအလှက ချစ်စရာလေးပါ။ ကျွန်တော်လည်း ပြူတင်းပေါက်က မြင်နေရတဲ့ တောတောင်ရှုခင်းအလှတွေကို ကြည့်နေရာကနေ တစ်ချက်တစ်ချက် အကြည့်တွေက ထားမျက်နှာလေးပေါ် ရောက်ရောက်သွားမိတယ်။ တစ်ကြိမ်မှာတော့ ထားအကြည့်နဲ့ ဆုံသွားတယ်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 2:32 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
အဲဒီနေ့ကကျွန်တော် ရင်တွေအရမ်းခုန်သွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ဘ၀မှာ တစ်ခါမှ ကြုံဖူးသေးတဲ့ အရာတစ်ခုနဲ့ တွေ့လိုက်ရလို့ပဲ။ ပြီးမှ စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ် ကျွန်တော်မှားသွားပြီ။
အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်တော်ဟာ ငယ်ရွယ်ပြီးတက်ကြွတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ပေါ့။ ကျွန်တော့ ဘ၀ဟာမိဘတွေရဲ့ အုပ်ထိမ်းမူအောက်မှာ နွေးထွေးစွာ ပညာသင်နေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်။ စည်းကမ်းကြီးတဲ့ ဖေဖေ။ မိန်းကလေးနဲ့ ရောရောနှောနှောနေတာကို မကြိုက်တဲ့မေမေ။ မုန့်ဖိုးပေးတာကို လုံးဝမကြိုက်တဲ့ ဖွားဖွား။ အဲဒီအရာတွေက ကျွန်တော့ဘ၀ ထိန်းကွပ်ပေးတာလား ချုပ်နှောင်ထားတာလားဆိုတာ အဲဒီအချိန်က မခွဲခြားတတ်ခဲ့ဘူး။
အခုခရီးတိုလေး တစ်ခုသွားမလို့။ ကျွန်တော်တို့သွားကြမှာက တောင်းအေ့ ကားလေးနဲ့ပါ။ ခရီးကတော့ နေ့ချင်းပြန်ပါပဲ။ သွားရမဲ့ခရီးက ရန်ကုန်ကနေ ၅ နာရီကျော်ကျော်လောက် ကားမောင်သွားရမဲ့ နေရာတစ်ခုကိုပါ။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ သွားမဲ့ အဖွဲ့မှာ ကျွန်တော်က အငယ်ဆုံး။ ဒရိုင်ဘာအပါဝင် စုစုပေါင်း ၇ ယောက် ။ ဇတ်လမ်းကတော့ အဲဒီကပေါ်က စခဲ့တာပဲ။
တောင်းအေ့ကားက လူထိုင်တဲ့ ခုံတန်း ၄ တန်းပါတယ်။ လူကြီးသုံးယောက်က ခုံတန်းတစ်ခုမှာ တစ်ယောက်စီ နေရာယူလိုက ကြတယ်။ ကျန်တာက ကျွန်တော်ရယ် ကျွန်တော့ထက် ၅ နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ အစ်မကြီးနှစ်ယောက်။ ကျွန်တော်တို့သုံး ယောက်က နောက်ဆုံးခုံတန်းမှာ ထိုင်ရတာ။ အစ်မကြီး နှစ်ယောက ထဲက တစ်ယောက်ကိုတော့ ကျွန်တော် မျက်မှန်းတမ်းမိနေတယ်။ ကျန်တဲ့တစ်ယောက်ကိုတော့ ခုမှမြင်ဖူးတာ။
ရန်ကုန်မြို့ထဲကနေ ကားစထွက်တော့ နေ့လည်တစ်နာရီလောက် ရှိနေပြီ။ ကားက ထောက်ကြံ့ကျော်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်းငိုက်တော့ တာပဲ။ ကျွန်တော့ဘေးမှာ ထိုင်တာက မျက်မှန်းတမ်းမိတဲ့ အစ်မကြီး။ သူလဲငိုက်တာပဲ။ ငိုက်တာက ကိစ္စမရှိပေမယ့် ပြသနာက သူ့ခေါင်းက ကျွန်တော့ပခုံးကို လာမှီပြီးငိုက်နေတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ညနေ ၆ နာရီလောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ လိုရာခရီးကို ရောက်တယ်။ ရန်ကုန်ကို့ ပြန်ထွက်တော့ ညကိုးနာရီ။ လမ်းမှာက မိုးကမှောင်မှောင်။ ထမင်းစားထားတော့ ဗိုက်ကလေးဆိုတော့ ငိုက်ကြပြန်ရော။
အဲဒီမှာ ကျွန်တော့ ဘေးနားလေးက အစ်မကြီးက ကျွန်တော့ပခုံးကိုပဲ မှီအိပ်ပြီးလိုက်လာတယ်။ တကယ်ဆိုရင်ဗျာ သူရဲ့ ဟိုဘက်ဘေးမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရှိနေတာပဲ သူပေါ်သွားမှီပါလား။ သူကအဲလို မဟုတ်ပဲ ကျွန်တော့အပေါ်မှာပဲ မှပြီးအိပ်လာတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် မိန်းလေးတစ်ယောက်နဲ့ အဲလောက်နီးနီး ကပ်ကပ်ကြီးတစ်ခါ မှမနေဘူးဖူးဗျ။
သူဆီကကိုယ်သင့်နံ့ ရနေတယ်။ အလင်းရောင် ဖျော့ဖျော့ အောက်မှာ သူမျက်နှာကို ကြည့်လိုက်တော့ မိတ်ထားတဲ့ မျက်လုံးရဲ့ မျက်တောင်လေးတွေက ကော့စင်းနေတယ်၊ နှာတံက ချွန်ချွန်လေး၊ နုတ်ခမ်းက နီညိုရောင်လေး ဆိုးထာပြီး ကော်ဖီရောင် လိုင်နာတားထားတယ်။ ဖောင်းအိနေတဲ့ ပါးရဲ့ တစ်ခြမ်းက ကျွန်တော့ပခုံးကို မှီထားတယ်။ အမှန်တိုင်းပြောရရင် သူကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်အသက်ရူကြပ်လာတယ်။
နဲနဲချမ်းစိမ့်စိမ့်ရှိတာကြောင့် လက်ကိုပိုက်ထားတယ်။ ကားကနည်းနည်းလောက် ယိုင်လိုက်ရင် သူရဲ့ ဖွံ့ထွားတဲ့ ရင်သားတွေက ကျွန်တော့ရဲ့ လက်တံတောင်ကို လာလာတိုက်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော့ လက်တွေကို ပိုက်ထားတာဖြေပြီး ပေါင်ပေါ်ကိုတင်ထားလိုက်တယ်။ သူကတော့ ကျွန်တော့ ပခုံးပေါ်ခေါင်းတင်ပြီး အိမ်မောကျဆဲ။ ခဏလောက်ကြာတော့ ကျွန်တော့ ပေါင်ပေါ်မှာ မှောက်လျှက် ချထားတဲ့ ကျွန်တော့လက်ချေင်းတွေ ပေါ်ကို သူ့ရဲ့ လက်က ရောက်လာတယ်။ သူတမင်ချလိုက်တာပဲလား မတော်တဆရောက်လာတာလား ကျွန်တော်မသိ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်အသက်ရူရမှာ မေ့မေ့သွားလို့ ရင်ဘတ်ထဲမှာ မွမ်းကျပ်လာတယ်။ ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ မှောက်လျှက် အနေထားမှာရှိတဲ့ ကျွန်တော့လက်တွေကို ပလက်လှန်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူလက်တွေကို ကျွန်တော်ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်တယ်။ သူကတယ်ပဲ အိမ်ပျော်နေတာလား မတော်တဆဖြစ်တာလား။ ကျွန်တော်မစဉ်းစားတပ်တော့။ သူလက်တွေကို ပွတ်ကြည့်တယ် တုပ်တုပ်မျှမလုပ်။ ဆိတ်ကြည့်တယ် ဘာမှတုန့်ပြန်မူ မရှိ။ သေချာသွားပြီ သူအိပ်ပျော်နေတာမဟုတ်။ အိမ်မက်များမက်နေတာလာ။ ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။ စဉ်းစားလိုက်တော့ အမေ့မျက်နှာပေါ်လာသည်။ တချိန်တည်းမှာပဲ သူငယ်ချင်းတွေက ကျွန်တော့ကို ငတုံးလို့ ၀ိုင်းလှောင်နေကြသည်။ မေ့မျက်နှာကိုမြင်ရင် ဆုပ်ထားတဲ့ သူလက်တွေ လွတ်လိုက်ချင်သည်။ ဒါပေ့မယ့် တစ်ခြား အတွေးတစ်ခုက ငါးကြော်ဘန်းထဲကို ရောက်ပီးကမှ မစားပဲထွက်ပြေးတဲ့ ကြောင်တစ်ကောင်ကို အတယ်လို့ခေါ်မလား။ ဘယ်ကြောင်မဆို ငါးကြော်ဘန်းထဲ ရောက်မှတော့ ဆွမ်းတော်တင်မဲ့ ဟင်းလားဘာလား မစဉ်းစားနေတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီညက အသိဥာဏ်မဲ့တဲ့ ကြောင်တစ်ကောင်လို ငါးကြော်တွေ တစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင် . . . . ။
ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ ညနှစ်နှာရီကျော်နေပြီ။ ကားက ကျွန်တော်တို့ အိမ်ကိုအရင်လိုက်ပို့ တယ်။ ကျွန်တော် ကားပ်ါကဆင်းတော့ ခြေလှမ်းတွေ မှားနေတယ်။ ကိုယ့်လိပ်ပြာကို မလုံလို့လား မသိ ဘယ်သူကို မှမကြည့်ရဲ။ ဘယ်သူကိုမှလဲ နုတ်မဆက် ဒီတိုင်းဆင်းချလာသည်။ ကားပေါ်မှာ နုတ်ဆက်သံတစ်ခုတော့ ကြားနေရသည် မောင်လေးနောက်မှ တွေမယ်နော်. . . . .
အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးတော့ မေမေနဲ့ မျက်နှာခြင်ဆိုင်ရမှာကို ကျွန်တော် အလိုအလို ကြောက်နေသည်။ အစ်မတွေနဲ့ စကားပြောရမှာလည်းဝံ့ရဲခြင်းမရှိ။ လုပ်မိလိုက်တဲ့ အရာတိုင်းမှာ အလွဲလွဲအချော်ချော်။ ကျွန်တော် ကိုယ်ကျွန်တော်လည်း အပြစ်ကြီး ကျူးလွန်ထားမိတဲ့ လူတစ်ယောက်လို ထင်နေသည်။ နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ့်မျက်နှာကိုတောင် မှန်ထဲမှာ ကြည့်ရမှာ မ၀ံ့ရဲတော့။ ကျွန်တော် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ
နောက်ရက်ကျတော့ ဟိုအစ်မကြီး ဆီကိုဖုန်းဆက်လိုက်သည်။ ကျွန်တော် တွေချင်လို့ပါလို့ ပြောတော့ အဆင်ပြေမဲ့နေရာကို ပြောပါသူလာခဲ့မယ်တဲ့။
လူရှင်းတဲ့ အအေးဆိုင် တစ်ခုရဲ့ အပေါ်ထပ်မှာ သူနဲ့ ကျွန်တော်တွေ့ကြသည်။ သူအလှဆုံး ဖြစ်အောင်ပြင်လာသည်။ သူပုံက မဆိုးလှ ရုပ်ရည်ရော ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်ရော ယောင်္ကျားလေးမျာကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ဒါပေ မယ့်ကျွန်တော် အရင်နေ့ကလိုရင် မခုန်တော့။ သူကျွန်တေ့ကို စတွေတယ်ဆိုရင်ပဲ။ ပြည်တည်တည် အမူရာနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ တွေချင်ရတာလဲ မင်းလဲ လူကြည့်တော့ အေးမလိုနဲ့ ကဲတယ်နော်တဲ့။ ကျွန်တော် ခေါင်းတစ်ချက် ငုံ့လိုက်သည်။ ပြီတော့ပြန်ထောင်ပြီး သူကိုစိုက်ကြည့်နေသည်။ သူကမလုံ မလဲဟန်နှင့် သူကိုသူ ခေါင်းငုံ့ပြီး ပြန်ကြည့်နေသည်။ ပြီးတော့ ဘယ်သွားချင်လို့လဲတဲ့။ ကျွန်တော်က ဘယ်မှ သွားဖို့ မဟုတ်ပါဘူး လို့ပြောတော့။ ဒါဆိုရင် ဘာလို့ တွေ့ခင်ရတာ လဲတဲ့။
အရင်နေ့က ကားပေါ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စကို တောင်းပန် ချင်လို့ပါလို့ ပြောတော့။ သူ့မျက်နှာတစ် ချက်ပျက်သွားသည်။ ပြီးမှ အဆန်းပါလား လို့ ခပ်ရွှန်းရွှန်းပြန်ပြေသည်။ ကျွန်တော်က ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒီညက အမှားခဲ့တဲ့ ကိစ္စကို တောင်းပန်ချလို့ပါ လို့ထပ်ပြောတော့။ သူမျက်နှာတင်သွားသည်။ ပြီးတော့ သူဆက်ပြောသည် အခုခေါ်တာ အဲဒါကို တောင်းပန်မလို့ ခေါ်တာဟုတ်လားတဲ့။ ကျွန်တော်ခါင်းညိမ့်ပြလိုက်သည်။ သူမျကနှာတွေ တဖြည်းဖြည်းခြင်းရဲတက်လာသည်။ ပြီးတော့ နင် . . နင် . မမိုက်ဘူးဟာ ဆိုပြီး စကားဆုံသည်နှင့် ကော်ဖီအေးတွေနဲ့ ကျွန်တော့ရင်ဘတ်ကို ပက်ပြီး ထပြေးသွားသည်။
ကျွန်တော် နောက်ပိုင်းမှာ မျက်လုံးအားလုံးကို ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရဲပါပြီ။ အဲဒီအစ်မကြီးနဲ့ ဘယ်တော့မှ မတွေ့ဖြစ်ကြတော့ပါ
မှတ်ချက်။ ။ မြန်မာစာရေးရာတွင် စကားပြောနှင့် စကားပြေကို ရောမရေးရဆိုတာကို စမ်းပြီးးရောရေးထားပါတယ်။ ဘာလိုများရှိပါသလဲ။ သင့်ရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ကြိုဆိုလျှက်
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 11:49 PM6ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
မန္တလေး မဟာမြတ်မှုဘူရားကြီးရဲ့ ဗိုက်တော်ပုံပါ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 10:03 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ဒီပုံက မန္တလေး မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားနားမှာ အလှုခံနေတဲ့ ကိုရင်လေးတွေပါ။ ဘာပုံလိုက်ရိုက်ရင် ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေတုန်း ကိုရင်လေးတွေဆွမ်းခံနေတာ တွေ့လို့ တန်းစီပေးပါလို့ လျှောက်ထားပြီး ရိုက်လာတာ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 9:44 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
သိပ်မကြာဘာဘူး ၂ ရက်တည်းပါ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 9:15 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၀၅ နှစ်အတွင်း တစ်နှစ်တာ ထွက်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်စာရင်းကို ကြည့်လိုက်တော့ ၁၆၈၀ အုပ်တဲ့။ မြန်မာလူဦးရေ ၅၃ သန်းနဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ လူတစ်ရာမှာ 0.0031 % ပဲရှိတယ်။
အဲဒီပမာဏဟာ နိုင်ငံတကာနဲ့ ယဉ်ကြည့်ရင် အခြေအနေ အဆိုးကြီး မဟုတ်ပေမယ့် တော်တော် လေးကိုနည်းနေတာကို တွေ့ရတယ်။
. . . . . . . . . . . . . . . . . တစ်နှစ်တာအတွင်း
နိုင်ငံ . . . လူဦးရေသန်း ထွက်သည့်စာအုပ် ရာခိုင်နှုန်း
အန္ဒိယ . . . ၁၁၂၃ သန်းကျော် ၅၇၃၆၈ ၀.၀၀၅၂
အင်ဒိုနီးရှား ၂၃၄ သန်းကျော် . ၅၀၀၀ . . . ၀.၀၀၂၁
ဂျပန် . . . . ၁၂၇ သန်းကျော် . ၆၅၅၁၃ . . ၀.၀၅၁
မလေးရှား ၂၆ သန်းကျော် . . ၅၈၁၆ . . . ၀.၀၂၂
ဖိလစ်ပိုင် . . ၉၀ သန်းကျော် . . ၅၀၉၃ . . . ၀.၀၀၅၆
စင်္ကာပူ . . .၄ သန်းကျော် . . . .၃၀၀၀ . . . ၀.၀၇၅
ထိုင်း. . . . .၉၉ သန်းကျော် . . .၁၂၀၀၀ . . ၀.၀၁၂
အမေရိကန် ၃၀၁ သန်းကျော် . .၆၄၇၇၁ . . ၀.၀၂
အင်္ဂလန် . . ၆၀ သန်းကျော် . . ၁၁၀၁၅၅ . ၀.၁၈
မြန်မာ . . . ၅၃ သန်းကျော် . . . ၁၆၈၀ . . . ၀.၀၀၃၁
၂၀၀၅ အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင် ထွက်ခဲ့သော စာအုပ်များ
စုစုပေါင်းစာအုပ် . . . . . . . . . . . . . 1680
၀တ္ထုရှည် . . . . . . . . 600 . . . . . 35.71 %
၀တ္ထုတိုပေါင်းချုပ် . . . 150 . . . . . 8.92 %
ကဗျာပေါင်းချုပ် . . . . 35 . . . . . . 2.80 %
စာပေဗဒေသာ . . . . . 132 . . . . . 7.86 %
ဆိုင်သောစာပေ . . . .16 . . . . . . 0.95 %
ကလေးစာပေ . . . . . 56 . . . . . . 3.33 %
လူငယ်စာပေ . . . . . 13 . . . . . . 0.77
(သုတ+ရသ) . . . . . 404 . . . . . . 24.02
သုတပဒေသာ(၀ိဇ္ဖာ) . .189 . . . . . 11.25
ရိုးရိုး+အသုံးချ(သိပ္ပံ) . . 71 . . . . . 4.22
နိုင်ငံရေးစာပေ . . . . . .၁၄ . . . . . 0.83
အဲဒီလို ယှဉ်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ စာဖတ်ဖို့လိုတယ် ဆိုတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော် နားလည်တဲ့ စာအုပ် ထုပ်ဝေသူတွေ စာရေးဆရာကြီးတွေ စာပပညာရှင်တွေနဲ့ မေးကြည့်တော့။ သူတို့တွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်အရ
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာပေတွေ ဖတ်ဖို့လို သေးတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ထွက်ထားတဲ့ ၁၆၈၀ မှာ ၀တ္ထုရှည်က ၆၀၀ အုပ် ဆိုတော့ စာဖတ်တဲ့ လူတော် တော်များများက အပျော်ဖတ်ကို ဦးတည်နေတဲ့ သဘောပဲ
စာအုပ်ဖြန့်ချိရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ မန်းနေဂျင်းဒါရိုက်တာ တစ်ဦး
ပညာရပ်ဆိုတာ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှပြောင်းလဲနေတာ အဲဒီတော့ ပညာရှင်ဆိုပြီး ဒီတိုင်းနေလို့ မရဘူး ကုယ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဘက်မှာ စာများများ ဖတ်ဖို့လိုတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အထူးပြောချင်တာက ဆရာဝန်တွေ။ အများစုကို ပြောတာပါ။ အကုန်းလုံးတော့ မဟုတ်ဘူး။ စာမဖတ်ကြဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကျော်က ကျောင်မှာ သင်ခဲ့တဲ့ စာတွေနဲ့ လူသတ်နေကြတယ်။
စာအုပ်စာရင်းကို ကြည့်ရတာ ရသနဲ့ အပျာ်ဖတ် စာပေ ကတော့ ပြည်ပနိုင်ငံတွေ နဲ့ယဉ်ရင် မဆိုးပါဘူး။ မြန်မာက ပညာရပ် ဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေ အထွက်နည်းနေလို့ပါ။ ဥပမာ လက်ရှိ ဂျာနယ်တွေမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သတင်းထောက် တွေ၊ ဂျာနယ်လစ် ဇင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ လေ့လာ ချင်ရင်တောင် ဘယ်မှာလဲ ဖတ်စရာ စာအုပ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆရာဇ၀နတို့ လက်ထက်က ရေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေ ဖတ်နေရတယ်။ အဲဒါကို ထုတ်ဝေသူတွေ ကိုသွားအပြစ် ပြောလို့လဲမရဘူး ။ ဟုတ်ပြီ ဂျာနယ်လစ်ဇင် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်ကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီရေးပြီး ထုတ်မယ် ဘယ်မှာလဲ ၀ယ်မဲ့လူ။ ဒါကတော့ ထားတော့ ဂျာနယ်လစ်ဇင်က လူအနည်းစုမို့လို့။
အင်ဂျင်နီယာ၊ တွေဆရာဝန်တွေ၊ ရှေ့နေတွေ စသဖြင့် ပညာရှင်တွေ အများကြီးပဲ။ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စအုပ်တွေကော ထွက်လား။ မထွက်ဘူး။ ဘယ်ထွက်မှာလဲ ဖတ်မဲ့လူမှမရှိတာ။ ဘယ်ဖတ်ကြမှာလဲ။ အလုပ်အပေါ်မှာ ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာမှ မရှိကြတာ။ အလုပ်အပေါ်မှာ ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိလာပြီဆိုရင် သူများထက်ကိုယ်က သာမှဖြစ်တော့မယ်။ သူများထက်သာ ဖို့က ကိုယ်က ပညာတော်မှ။ ပညာဆိုတာ ကျောင်းကသင်ပေးရုံ လုပ်ငန်းခွင်ထဲက အတွေ အကြုံလောက်နဲ့ မလုံလောက်ဘူး။ ကိုယ့်ထက်လုပ်သက်ရင့်တဲ့ လူတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ရေးသားထားတဲ့ စာတွေ နောက်ဆုံးပ်ါနည် ပညာတွေ မပြတ် လေ့လာ ဖတ်ရှုနေမှ သူနဲ့ ပြိုင်နိုင်တဲ့ လူဖြစ်မှာ ။
စာအုပ်တိုက် တစ်ခုမှ MD တစ်ဦး
တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာက ဥပဒေ အသစ်တစ်ခု ထွက်သွားရင် အဲဒီဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ဖြစ်နိုင်မဲ့ အလားအလာတွေ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ အခြေအနေတွေကို နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ စာအုပ်တွေ တော်လျှောက် ထွက်လာတာ။ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာကြည့်လိုက် ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စာအုပ်ထွက်တာ များများစားစားမရှိဘူး။ ရာဇသတ်ကြီး ဘယ်လာက် ပုဒ်မဘယ် လောက်ကို ကျူးလွန်ရင် ဘယ်လိုအပြစ်ဒဏ်ခံ ရတယ် ဆိုတာလောက်ပဲရှိတယ်။
ဂျပန်မှာဆိုရင်ရင် ရုံးတက်ရုံးဆင်း ကျောင်းတက်ကျောင်ဆင်း ရတဲ့အချိန်လေးမှာ ရထားပ်ါမှာ စာဖတ်ကြတယ်။ ထိုင်နေတဲ့ လူတွေတင်မဟုတ်ဘူး လက်တစ်ဘက်က ကွင်းကိုကိုင် ပြီးမှတ်တပ်ရပ် လိုက်ရတဲ့ လူတွေပါ ကျန်တဲ့ လက်တစ်ဘက်က စာအုပ်ကို ကိုင်ပြီးဖတ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဂျပန်သုံး ယောက်မှာ တစ်ယောက် မျက်မှန်တပ်ရတယ်။ သူတို့ဆီမှာက စာကို အဲလိုဖတ်တာ။ အရင်တလောက ကျွန်တော် ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကို ရထားစီးသွားတယ်။ ရထားကလဲ ချောင်မှချောင်။ ကျေင်သားကျောင်သူတွေက အတွဲကိုယ်စီနဲ့ တစ်ယောက်ရင် ခွင်တစ်ယောက်အိပ်ပြီး ကိုးရီးယားကာ ကြည့်နေရသလိုပဲ။ စာအုပ်ဖတ်ပြီး လိုက်လာတဲ့ သူတစ်ယေက်မှ မရှဘူး။ ဒီလို ကျောင်းတက် ကျေင်းဆင်း အသွားအပြန် ရထားပေါ်မှာ အချိန်နှစ်နာရီလောက်ရတယ်။ အဲဒီအချိန်တွေကို သာစာဖတ်ကြမယ်ဆိုရင်. . .
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 11:13 PM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
တစ်ခါတုန်းက ကောင်လေးတစ်ယောက်မှာ အရမ်းချစ်တဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ရှိတယ်။ တစ်နေ့တော့ ကောင်လေးရဲ့ ချစ်သူက အကြောင်းပြချက် မရှိပဲ ကောင်လေးကို အဆက်အသွယ် ဖြတ်သွားတယ်။ ကောင်လေးရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ တစ်ယောက်ထဲ ကြေကွဲနေရတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဖေဖော်ရီလ ၁၄ ရက်ချစ်သူများ နေ့ရောက် ဖို့အချိန်တွေက လည်းတစ်ဖြည်းဖြည်း ချင်းနီကပ်လာပါတယ်။ စတိုးဆိုင်တွေ Gift Shop ဆိုင်တွေ စတိုးဆိုင်တွေမှာ ပန်းစည်းတွေ ချောကလက်တွေ ပို့စကဒ်တွေနဲ့ ချစ်ခြင်းရဲ့ သင်္ကေတ ပေါ်လွင်အောင် ခင်းကျင်းထား ကြတယ်။ ကောင်လေးအတွက် တော့ချစ်သူများနေ့ ဆိုတာ သူနဲ့ မဆိုင်တော့သလိုပဲ။ အမှတ်တရ ပန်းစည်းတွေ ချောကလက်တွေကလည်း ကောင်လေးကို နောက်ပြောင်နေကြ သလို။
တန်ဖိုးနည်းသည် ဖြစ်စေ များသည် ဖြစ်စေ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်ချစ်သူကို ဘယ်သူမဆို ဒီလိုနေ့မျိုးမှာ အမှတ်တရ အနေနဲ့ ၀ယ်ပေးချင်ကြတာပဲလေ။ ကောင်လေးလဲ သူသိပ်ချစ်ရတဲ့ သူကို ပေးချင်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူသိပ်ပေးချင်နေတဲ့ ချစ်သူက သူကို့ အဆက်သွယ် ဖြတ်ထားတာလေ။ ဘယ်လိုပေးလို့ ရမှာလဲ။
Gift Shop ဆိုင်ကို ပို့ခိုင်းရမလား။ ကောင်လေး စဉ်းစားကြည့်တယ်။ ပို့ခိုင်းတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ ကောင်လေးပေးတဲ့ လက်ဆောင်တွေကို ချစ်သူက လက်ခံပါ့မလာား။ လက်ခံခြင်းရှိ မရှိဆိုတာ ကောင်လေး သိချင်တယ်။ နောက်တစ်ရက်မှ Gift Shop ဆိုင်ကို ပြန်မေးကြည့်မယ် ဆိုရင်လည်း မသေချာ။ ဒီတော့ ကောင်လေး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက် ချစ်သူများနေ့
အ၀တ်စား ဆင်တူ ၀တ်ထားတဲ့ စုံတွဲလေးတွေကို လမ်းထဲ ထွက်လိုက်တယ် ဆိုတာနဲ့ တွေ့နေရပြီ။ စတိုးဆိုင်တွေမှာ အမှတ်တရ ပစ္စည်းအရောင်ဆိုင်တွေမှာ ပန်းခြံတွေ အအေးဆိုင်တွေ တွေ့လိုက်တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ စုံတွဲလေးများက ချစ်သူများနေ့ကို သရုပ်ဖော်နေကြတယ်။
ကောင်လေးလက်ထဲမှာ ပန်းစည်းတစ်ခု အရုပ်တစ်ရုပ် ချောကလက်တစ်ဘူး အင်္ကျီတစ်ထည် အမှတ်တရစာတွေ ရေးထားတဲ့ ပို့စကဒ်တစ်ခု။ သူ့ခြေလမ်းတွေက သူ့ချစ်သူရှိရာ ဆိတ်ငြိမ် ရပ်ကွက် တစ်ခုကို ဦးတည်နေတယ်။ ကောင်လေးကိုယ်တိုင် သွားပေးတော့မှာပါလား။ အင်းလေ ချစ်သူက ပေးတဲ့ လက်ဆောင်တွေကို ယူမယူ ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် သိချင်တော့လည်း ကိုယ်တိုင် ပေးရုံပဲပေါ့။
အရင်က ဒီရပ်ကွက်ကို ၀င်တဲ့လမ်းလေးမှာ နှလုံးသားနှစ်ခု ရင်ထခုန်သံတွေ ပြိုင်ခဲ့ကြဖူးတယ်။ ဒီနေ့တော့ ဒီလမ်းထဲမှာ ရင်ခုန်သံက တစ်ခုတည်း။ အဓပ္ပါယ်မဲ့တဲ့ ရင်ခုန်ခြင်းမျိုး မဟုတ်တည့်တိုင် ရင်ခုန်သံတွေက အထီးကျန်ဆန်နေတယ်။ ကောင်မလေးရယ် ကောင်လေးပေတဲ့ လက်ဆောင်တွေကို လက်ခံပေးပါနော်။
အုပ်ဆိုင်းဆိုင်း သစ်ပင်တွေနဲ့ ခြံတစ်ခြံအရှေ့ရောက်တော့ ကောင်လေး ရပ်လိုက်တယ်။ဘဲလ်တီးလိုက်တော့ အသားဖြူဖြူ နဲ့အမျိုးသမီးကြီး တစ်ယောက် ထွက်လာတယ်။ ကောင်လေးက ကောင်မလေးတို့ အိမ်လားလို့ မသိချင်ယောင် ဆောင်မေးလိုက်တယ်။ ဘာကိစ္စလဲတဲ့။ ကောင်လေးက ကျွန်တော် Gift Shop ဆိုင်ကပါ၊ ကောင်မလေးကို ပစ္စည်းပို့ခိုင်းထားလို့ လာပို့တာပါ လို့ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ အမျိုးသမီးကြီးက သဘောကျဟန်နဲ့ ပြုံးတယ်။ ပြီးတော့ အိမ်ဖော် ကောင်မလေးကို ခေါ်ပြီး ပစ္စည်းတွေ လာသယ်ခိုင်းတယ်။ ကောင်လေးက ဒီလောက်နဲ့ ဘယ်ကြေနပ်ပါ့မလဲ ကာယကံရှင်က ပစ္စည်းလက်ခံ ရရှိကြောင်း လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ ပြောတယ်။ ဒီတော့ အမျိုးသမီး ကြီးကပြုံးပြီး သမီး အူယောင်နေလို့ အိပ်ရာထဲမှာ မနိုင်တာ ကြာပြီ။ အန်တီက မေပါ။ အန်တီပဲ ထိုးပေးလိုက်မယ်နော် ဆိုပြီး အမျိုးသမီးကြီးက ပစ္စည်းလက်ခံရရှိကြောင်း လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တယ်။
အပြန်ခရီးမှာတော့ ကောင်လေးအတွက် မေးစရာမေးခွန်းတွေ စဉ်းစားစရာ ပုဒ်စာတွေ အများကြီးပါလာပါတော့တယ်
ကောင်မလေး ကောင်လေးကို အဆက်သွယ်ဖြတ်ထားတာလား ပြတ်နေတာလား
ကောင်းမလေး မဆက်သွယ်တာ တကယ်မချစ်တော့လို့လား ကျမ္မာရေးကြောင့်လား
ကောင်မလေး ကျမ္မာရေး မကောင်ဘူးဆိုတာ တကယ်ပဲလား
ကောင်းလေးကို ၀ိုင်းစဉ်းစားပေး ကြပါဦး
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 10:21 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ကဲဗျာ ဘီယာအကြောင်းကို ဗဟုသုတဖြစ် ပြောကြည့်ရအောင်
ဘီယာသည် အဏုဇီဝ တစ်မျိုးဖြစ်သည့် အလင်/ တဆေး ( Yeast ) ဖြင့် ( Malt ) အချိုရည်ကို စိမ်ရည် ဖောက်ခြင်းမှ ရရှိသောအဖျော်ရည် တစ်မျိုးဖြစ်၍ ရေနှင့် အာဟာရဓာတ် ပြည့်ဝသော ပရိုတင်း၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်၊ သတ္တုဓာတ်များ၊ သကြားဓာတ်၊ ဗီတာမင်နှင့် ဓာတ်ရော့ ရုဏ်သတ္တိရှိသည့် အင်အော်ဂဲနစ် ဒြပ်ပေါင်း ( Antioxidants ) များပါဝင်ပါသည်။ ထို့အတူ Hydrophilic Spirulina Extract SPH 3000 တွင်လည်း ဘီယာတွင်ပါဝင်သည့် အော်ဂဲနစ် ဒြပ်ပေါင်း များပါဝင်သည်။
ထို့ကြောင့် ဘီယာကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့်
ပရိုတင်း၏ အခြေခံယူနစ် ဖြစ်သော အမိုင်နိုအက်ဆစ် ၁၈ မျိုး အချိုးကျပါဝင်၍ ယင်း ၁၈ မျိုးအနက် ကိုးမျိုးမှာ ခန္ဒာကိုယ်မှ ထုတ်လုပ်ပေး နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ခန္ဒာကိုယ်မှ ထုတ်ပေး နိုင်ခြင်းမရှိသည့် အမိုင်နို အက်ဆစ် ကိုးမျိုးတွင် ရေပြာနှင့် ဆံပင်များ မပျက်စီးအောင် ထိမ်းသိမ်း ကာကွယ်ပေးခြင်း ၊ ခွန်အားဖြစ်စေခြင်း နှင့် အာဟာရချို့တဲ့သူ များအတွက် အာဖြည့်အာဟာရအရည် Energy Drink အနေဖြင့် သောက်သုံးနိုင်သည်။
သတ္တုဓာတ်နှင့် သကြားဓာတ် မျတစွာ ပါဝင်သဖြင့် ခွန်အားတိုးစေပြီး ခန္ဒာကိုယ်ဆဲ(လ်)များ ဖြစ်ပျက်မူကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း။ အသားအရေစိုပြေခြင်း၊ ဗီတာမင် စီ နှင့် ဒီ အုပ်စု ပါဝင်ခြင်းကြောင့် စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ် မူကိုပြေပျောက်စေခြင်း။
အကယ်၍ သင်သောက် သုံးသော ဘီယာသည် စပီရူလိုင်းနား ဘီယာဖြစ်ပါက
မူလဘီယာ၏ Heresins မှ Polyphenols နှင့် Spirulina SHP 3000 မှ Polyphenols များ၏ Antioxidant ဂုဏ်သတ္တိကြောင့် ခန္ဒာကိုယ်တွင် ရောဂါ ဖြစ်စေမည့် အကြောင်အရာများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း စိတ်ဖိစီးမူကြောင့် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် ရောဂါများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ စပီရူလိုင်းနား ဘီယာ 330 Ml တစ်ပုလင်း သောက်ခြင်သည် ပရိုဗီမင် 10 mg ဆေးပြား သုံးပြားနှင့် ညီမျှသည်။
ဘီယာတစ်လုံးတွင် ပါဝင်သည့် အယ်ကိုဟော အချိုးများ
မန်းနီ7%
မန်းပြာ5%
မြန်မာဘီယာ4% ကျော်
စပီရူလိုင်းနားဘီယာ5%
ဒဂုံ4% ခန့်မှန်းခြင်း သာဖြစ်သည်
တိုက်ဂါ6း% ခန့်မှန်းခြင်း သာဖြစ်သည်
မှတ်ချက်။ ။ စပီရူလိုင်းနား ဘီယာကို အရှေ့တောင် အာရှတွင် မြန်မာတစ် နိုင်ငံတည်း သာထုတ် လုပ်နိုင်သေး ခြင်းဖြစ်သည်။ စပီရူလိုင်းနား ဖြင့်ဘီယာချက် ခြင်းကို ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် မြန်မာနိုင်ငံ တွင်းတောင်ထွက် စပီရူလိုင်းနား များဖြင့် စတင်စမ်းသပ် ထုတ်လုပ် အောင်မြင်ကာ ကမ္ဘာအနှံ့သို့ တင်ပို့ရောင်ချ လျှက်ရှိသည်။ ယခုအခါ အာရှတွင် တရုပ် နှင့် ဂျပန်တို့ တွင်စပီရူလိုင်းနားဘီယာကို ထုတ်လုပ်နေကြပြီ ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စပီရူလိုင်းနား ဘီယာကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် မန္တလေး ဘီယာစက်ရုံ တွင်စတင် စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် တရားဝင် ထုတ်လုပ်ခွင့် ရရှိခဲ့သည်။ ယူခုအခါ စပီရူလိုင်းနာ ဘီယာကို ရန်ကုန် မြို့တွင်ပါ စည်ဘီယာ အဖြစ်ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပြီး မတ်လမှ စတင်ကာ မလေးရှား ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ကိုယ်စလှယ် ယူ၍ ပြည်ပနိုင်ငံများကို ရောင်းချရန် စီစဉ်နေကြသည်။
ကဲမိတ်ဆွေ အိမ်သူ သက်ထားဆီက တရားဝင် ဘီယာသောက်ခွင့် လိုင်စင် လိုချင်ရင် အလွတ်သာရွှတ်ပြ လိုက်ပေတော့။ တစ်ခုမှတ်ထားရမှာက အသက်ရှင် နေထိုင်နိုင်ဖို့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ် ဆိုတဲ့ရေတောင်မှ သောက်တာများရင် ဘေးဖြစ်တတ်တယ်နော်
Spirulina Beer တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းစာတမ်း
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 10:01 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 2:14 PM3ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
မနက်မိုးလင်းလို့ အိမ်ရာထလိုက်တာ့ လှိုင်မြစ် ထဲမှာမြူတွေ ဖွေးနေအောင် မြင်ရသည်။ မြူတွေက လှိုင်မြစ်ပေါ်တင် မဟုတ်ပဲ ရန်ကုန်မြို့ ကအထပ်မြင့် အဆောက်အဦးတွေမှာပါ ရစ်ဆိုင်းနေသည်။ အဝေးကို မျှော်ကြည့်လိုက်တော့ နေရောင်ကမိုင်းပျပျ။ ကျွန်တော့ အတွေးများကလည်း အတိတ်ဆီ . . .
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ မြောက်ဘက် မိုင်လေးရာကျော် အကွာက တောင်ကြားမြို့လေးမှာ ဆောင်းရာသီရဲ့ သင်္ကေသ တစ်ခုအနေနဲ့ မြူနှင်းတွေက မတ်လ ပထမပတ် လောက်ထိ လွမ်းခြုံ ထားတတ်ကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဒေသမှာ မြူနှင်းကျပြီ ဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံး ပိန်းပိတ် သွားပြီး ဆယ်ပေ ကျော်ရင် ဘာမှ မမြင်ရတော့ဘူး။ နေလုံး ကို နံနက် ၁၀ ကျော်မှ မြင်ရတယ်။ အစောဆုံးမြင်ရရင် ကိုးနာရီ တစ်ခါတရံမှာ ၁၂ နာရီလောက် မှနေလုံး ကို မြင်ရတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ 2000 ပြည့်နှစ်ရဲ့ ပထမဆုံး နေလုံးကို နေ့လည် ၁၂ နာရီလောက် မှမြင်ရတယ်။
အဲဒီလို မြူတွေ ကြားထဲမှာ စက်ဘီးစီး ရတာ အရမ်းသဘော ကျတာပဲ။ တော်တော်ကြာကြာ စက်ဘီး စီးမိရင် ဆံပင်တို့ အင်္ကျီတို့က အမွေးလေးတွေမှာ ရေစက်ကလေးတွေ တွဲလွဲခို လာတတ်တယ်။
မြေကြီးရဲ့ သဘာဝက နေ့အခါမှာ အပူကို စုပ်ယူပြီး ညအခါမှာ အပူကို လွတ်ထုတ် လေ့ရှိတယ်။ ဆောင်းရာသီ ရောက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ အေးတဲ့ သဘာဝရှိတာကြောင့် နေ့ခင်းဘက်မှာ မြေကြီးက အပူကို ကောင်းစွာမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် ညအခါမှာ လွတ်ထုတ်တဲ့ အပူကတော့ ပုံမှန်အတိုင်းပဲ လွတ်ထုတ်ကြတယ်။ အဲဒီအခါမှာ မြေကြီးက အပူဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်ပေါ်တယ်။
အပူဆုံးရုံးတော့ မြေကြီးက အေးသွားရော။ မြေကြီး အေးသွားတဲ့ အခါမှာ မြေကြီး အပေါ်ပိုင်း မှာရှိတဲ့ လေတွေကို အပူစီးကူးခြင်း နိယာမအရ အအေးဓာတ်တွေကို စီးကူသွားစေတယ်။ လေတွေဟာ အေးလာတော့ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ပြီး ရေမှုံ ရေမွှားလေး တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတယ်။ အဲဒီရေမှုံ ရေမွှားလေးတွေ များပြားလာတဲ့ အစုအဖွဲ့ကို မြူလို့ခေါ် ပါတယ်။
မြင်ရတဲ့ အကွာဝေးကို အဝေးမြင်တာ လို့ခေါ်တယ်။ ဒီအမှုံ အမွားလေးတွေ ကြောင့် အလင်းက မဖောက်နိုင်တော့ဘူး။ အဲဒီမှာ အဝေးမြင်တာက ကျဆင်းသွားတယ်။
မိုးဇလ ပညာရှင်များကတော့ မီတာနှစ်ထောင်ကို ကျော်ပြီး မမြင်ရတော့ရင် မြူ လို့ခေါ်တယ်။ မြူတွေဟာ အရွယ်အားဖြင့်လည်း ကြီးလားတယ်။ ပိုပြီးလည်း ပိတ်မှောင် လာတယ်။ အဝေးမြင်တာ ကလည်း မီတာတစ်ထောင် အောက်ကျသွားပြီ ဆိုရင် မြူထူ လို့ခေါ်တယ်။
မြူတွေဟာ များသေားအားဖြင့် ဇန်န၀ါရီနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ လတွေမှာ ကျတတ်တယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ နောက်ဆုံးပတ် အထိ မြူတွေကျဆင်း နေသေးတယ်ဆိုရင် အဲဒီနှစ်ရဲ့ မုတ်သုန်ရာသီ နောက်ကျခဲ့ တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေပါတယ်။
မြူဟာ များသောအား ဖြင့် ညပိုင်းတွေမှာ ကျလေ့မရှိပဲ နေစထွက်တဲ့ အချိန်ကနေ စကျလေ့ရှိတယ်။ နေမြင့်လာ တာနဲ့အမျှ မြူတွေက လည်းတဖြေးဖြေးချင်း ပျောက်ကွယ်ကုန် ကြတယ်။
မြူကျဆင်းခြင်းကြောင့် လေမုန်တိုင်းလို အန္တရယ် မပေးနိုင်ပေမယ့် အဝေးမြင်တာ ကျဆင်းသွား ခြင်းကြောင့်။ ယဉ်များတိုက် ခိုက်မိခြင်း။ ပင်လယ် မြစ်ကြောင်းတွင်း ရှိ ရေယဉ်များ လှေများ တိုက်ခိုက်ခြင်း။ လေယဉ်ဆင်း မရခြင်းတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မြူအကြောင်းကို စိတ်ရှည်လက် ရှည်ရှင်း ပြပေးတဲ့ မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒ ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမူးချုပ် ဦးထွန်းလွင် ကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 11:34 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
မထိုက်ရဲ့ ဒီပို့လေးကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော် ဒီပို့ကိုတင်ဖြစ်သွားတယ်
အကြမ်းဖျင်း အားဖြင့်ကြည့် မယ်ဆိုရင် မိမိနိုင်ငံက အကောင်းဆုံး ဦးနှောက်တွေ ပြည်ပကို ရောက်သွားတာကို ဦးနှေက်ယိုစီးမှု Brain Drain လို့ယူဆကြပါတယ်။ ဒီယူဆချက်ဟာ တစ်ကယ်မှန်ရဲ့ လား။နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီဖြစ်စဉ်ကို Brain Drain လို့မယူဆတော့ပဲ ဦးနှောက်ပြန်စီးမှု Brain Gain လို့ပြောင်းလဲ လက်ခံလာကြပါပြီ။
အမိမြေနဲ့ ဝေးနေတဲ့ လူတစ်ယောက် တစ်နှစ်တစ်ခေါက် ပြန်လာမည်။ အနည်းဆုံးတော့ သူမိဘဆီကို ငွေပို့လိမ့်မည်။ သို့မဟုတ် သူတတ်ထားသော ပညာများကို တစ်နည်းနည်း ဖြင့်ဖြန့်ဝေနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အဝေးတစ်နေရာကနေ အမိမြေကို ပြန်လည် ကျေးဇူးပြုနိုင်စရာ ရှိတယ်လို့ နိုင်ငံအတော်များများ လက်ခံလာကြပါပြီ။
မကင်ဆီသုသေသန အဖွဲ့ရဲ့ လေ့လာချက်ရ အမေရိကန်ရောက် အန္ဒိယနိုင်ငံသားများ၏ အခွန်တော် ထည့်ဝင်ငွေဟာ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ၅၀၀ မီလီယံ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ပြင် အန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ Soft Ware လုပ်ငန်း အံ့မခန်းတိုးတက် လာတာဟာ အဝေးရောက် အန္ဒိယ ပညာရှင်များ ရဲ့ ပါဝင်စွမ်းဆောာင် ချက်များ ကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။ အန္ဒိယနိုင်ငံ ရဲ့ FDI နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြုတ်နှံမူ၏ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အဆိုပါ အဝေးရောက် များနှင့် ဆက်နွယ်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
တရုပ်ပြည်မှာ ဆိုရင်လည်း FDI ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ပင်လယ်ရပ်ခြား တရုပ်အမျိုးသားတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ 9/11 အရေးအခင်း အပြီးမှာ အမေရိကန်က ဗီဇာကန့်သတ်လိုက်တဲ့ အတွက် ပြည်တော်ပြန် တရုပ်တွေမှာ နည်းပညာသစ်များနှင့် အိုင်ဒီယာသစ်များ ပါလာကြပါတယ်။ အခုဆိုလျှင် တရုပ်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်တော်ပြန် အရေအတွက်ဟာ နှစ်စဉ် ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းမှန်မှန် တက်နေပါပြီ။
သွားတိုင်းလဲ ဦးနှောက်ယိုစီး တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ နီပေါနိုင်ငံ GDP ရဲ့ ၂၅ ရခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ ပြည်ပရောက် အလုပ်သမားတွေ ဆီကရတာပါ။
ဆိုလိုတာကတော့ အိမ်လေးတစ်လုံး နေရာလေးတစ်ခု တွင်းလေးတစ်တွင်းမှာတော့ ဘယ်တော့မှ ပြည့်စုံတယ်ဆို တာရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာက လူတွေ ဂျပန်ကို အိမ်မက်နေချိန်မှာ ဂျပန်က အင်ဂျင်နီယာတွေ တရုပ်က စက်ရုံတွေကို သွားနေကြတယ်။ တရုပ်ကလူတွေလဲ အမေရိကကို သွားကြတယ်။ အဲလိုသွားကြတာဟာ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးကို မုန်းလို့မဟုတ်သလို ။ ကိုယ်သွားမဲ့နိုင်ငံကို ချစ်လို့လဲမဟုတ်ကြပါဘူး။
ကိုးကား။ ။ ကျော်ဝင်း ၏ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ခေါင်းနှင့်ပန်း
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 2:38 AM2ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ